Dhulgariir Ka Dhacay Croatia – Goobjoog News
Wararka ka imaanaya dalka Croatia ayaa sheegaya in uu ku dhuftay dhul gariir kaas cabirkiisu lagu qiyaasay 6.4, waxana ka dhashay qasaaro kala duwan oo iskugu jiro dhimasho, dhaawac, iyo burbur baaxad weyn OO saameeyay dhismooyin dhowr ah inta la xaqiijiyay waxaa ku dhimatay 7 ruux, halka la sheegay 20 qof in ay dhaawacmeen, sidoo kale Lix qof ayaa laga soo badbaadiyay burburka.
Maalin ka hor Isniintii, dhulgariir cabirkiisu yahay 5.2 ayaa ku dhuftay bartamaha wadanka.
Kooxaha gurmadka ayaa baadi goobi ku haya dhismooyinka burburay hoostooda halkaas oo ay ka raadinayan dad laga cabsi qabo in ay ku hoos jiraan goobta. Sidoo kale dhul gariirka ayaa laga dareemay caasimada Austria ee Vienna.
Wakaaladda wararka Coroatia ee Hina ayaa sheegtay in dhul gariirka laga dareemay guud ahaan 12 dal oo kuyaal caalamka. Wasiirka arrimaha gudaha Davor Bozinovic ayaa sheegay in Croatia ay caawimaad ka sugeyso Midowga Yurub maadaama dalka ay ka dhacday musiibo u baahan gargaar bini aadanimo.
Xildhibaannada Federaalka ah oo Kaararkooda Aqaansiga Lagu Daray Hal Sano, Sabab?